Galmada naagta uurka leh waa sidee | Raaxada guurka
» Galmada naagta uurka leh waa sidee
Galmada naagta uurka leh waa sidee
Written By RG on Tuesday, February 8, 2011 | Tuesday, February 08, 2011
Maalmahaan, dadku waxay si ka fudud si kasta oo hore uga hadlaan galmada. Si kasta ha ahaatee, dadku mararka qaarkood way ka weji gabxaan iney ka hadlaan
galmada iyo uurka waxaana laga yaabaa iney dhibaato ka qabsato iney su'aalo ku saabsan galmada ula yimaadaan takhtarkooda ama kalkaalisada. Sidoo kale, haweenka iyo ragguba inta badan cabsidooda iyo dareemmadooda iyagaa isku qarsada.
Haddii kani uu yahay ilmahaagii ugu horreeyey, waxaa laga yaabaa inaadan ogaannin in uurku uu yahay waqti dareenkaaga badalmo uu adiga iyo aabbaha ilmaha isu kiin beddelo. Waxaa laga yaabaa inaad dareento daal, niyad kacsanaan, farxad, diiqo, rajo, cabsi, hooyonnimo iyo qurux, lur iyo soo jiidasho la'aan. Aabbuhu, dhinaca kale, waxaa laga yaabaa inuu dareemo inuu ku faano inuu ilmo aabbo u noqdo ama uu ka wel welo mas'uuliyado cusub. Waxaa laga yaabaa inuu dareemo inuu
Isbeddelladaan dabciga waxaa laga yaabaa iney saameeyaan sida uu midkiinba midka kale ka dareemayo iyo rabitaanka galmada. Shayga ugu muhiimsan ma ahan waxa aad dareemeysiin iyo sida aad ugu maleyneysaan inuu xun yahay, ee waa isla wadaagidda dareemmadaas. Sidaan, ayaad ku sameyn kartaan isbeddello si aad xiriirkiinna galmo uga yeeshaan mid labadiinnaba idiin wanaagsan.
Waxaa soo socda qaar ka mid ah jawaabaha su'aalaha ku saabsan galmada ee inta badan dhiba lammaaneyaasha ilmaha filanaya. Haddii aad su'aalo dheeraad ah
qabtid, ama haddii aad dhibaato galmo aad qabtid waqtiga uurkaaga oo aadan adinku xallin karin, talo weydiiso takhaatiirteenna adigoo kala soo xiriira emailkaan help@somalidoc.com. Inkastoo, laga yaabo inaad u maleyso in su'aashaadu ay tahay mid nooc ah, dadka kale waxay dhab ahaantii qabaan walaac kaas la mid ah.
Su'aalaha dhiba haweenka uurka leh
● Miyey rabitaannadayda galmadu noqonayaan kuwo yar waqtiga uurka?
Ma jiraan labo haween ah oo dareema si isku mid ah waqtiga uurka. Haweenka badankoodu, uureysigu ma beddelo xiiseyntooda galmada.
Haweenka qaarkoodna, xakamaynta dhalmadu waxay u ahayd carqalad, isla markaana waxaa laga yaabaa inuu uureysigu u yahay waqti xorriyad. Waqtiyo dhowr ah, haweenka qaarkood ayaa laga yaabaa iney dareemaan iney "luminayaan qaabkooda iyo sida ay u eg yihiin" waqtiga uurka. Qaar ayaa laga yaabaa iney ka fogaadaan galmada, iyagoo dareemaya rabitaankiisa oo aad u yar. Kuwa kale ayaa laga yaabaa iney doonayaan galmada iney lammaanahooda uga helaan dib u xaqiijinta inuu weli jecel yahay waxayna u arkaan mid soo jiidasho leh.
Haddii aadan xiiso u haynin galmada, kala hadal lammaanahaaga. Waxaa laga yaabaa iney lammaanahaaga ku adag tahay inuu fahmo.
● Miyey galmadu wax u dhimi kartaa ilmaha?
Suuragal ma ahan in ilmaha ku jira ilmo galeenka wax loogu dhimo galmo sameynta. Biyaha uu ilmuhu ku dhex sabbeynayo, xuubka biyaha celinaya, caloosha, derbiga uur ku jirta, iyo sinaha lafaha leh ayaa ka shaqeeya iney ilmaha ka dhowraan in la dhaawaco.
Haddii galmo sameyntu ay lur ama xanuun leedahay, kala hadal takhtarkaada.
● Ma waxyeello ayey leedahay in la isku biyo baxo (shahwad la isku daayo) waqtiga uurka?
Shahwo waxyeello uma lahan ilmaha.
● Intee ugu badan ayey galmadu ammaan tahay waqtiga uurka?
Haweenka qaarkood ma xiiseeyaan galmo muddada saddexda bilood ee ugu horreysa uurka. Tan waxaa laga yaabaa iney ugu wacan tahay daalka iyo isbeddellada ku yimid hormoonnada. Dareemmadaanu waxay badanaa isbeddelaan saddexda bilood ee ugu horreysa markaasoo rabitaanka galmada iyo tamar korortay laga yaabo iney yimaadaan.
● Galmo ma sameyn karaa waqti kasta oo uurka ka mid ah?
Galmada badanaa waa la oggol yahay inta uu uurku jiro oo dhan ilaa iyo dhowrka toddobaad ee ugu danbeeya. Takhaatiirta qaarkood waxay dareensan yihiin in waqtiga dhowrka toddobaad ee ugu danbeeya, galmadu laga yaabo iney keento dillaac waqtigiisa ka soo hormara oo ku yimaada xuubka.
Takhaatiir badan ayaa dareen xooggan ka qaba jawaabta su'aashaan. Waxaa kuugu wanaagsan inaad raacdid talada takhtarkaaga.
Galmada waa in la joojiyaa waana inaad takhtarkaaga wacdaa haddii:
● Haddii aan lahaa taariikh dhicis dhalid, weli galmo ma sii sameyn karaa?
Haddii aad lahayd dhicis, waa inaadan galmo sameynin saddexda bilood ee ugu horreysa ee uurkaaga. Takhtarkaaga ayaa kuu sheegi doona inaadan raacin baabuur kac-kacaya ama inaadan ka qayb qaadan hawlo jir ahaaneed oo waaweyn ama jir dhis. Xannibaadahaan waxay mandheerta (dhalmada ka dib) ka caawinayaan iney si ku filan ugu kobocdo si markaas uureysi guul leh uu dhaco.
● Cadaadiska waqtiga galmadu wuu i dhibaa laakiin xanuun iguma hayo.
Haddii miisaanka lammaanahaagu uu ku dhibayo, in booska la beddelo ayaa caawin karta.
● Aad ayey u adag tahay inaan lammaanahayga kala hadlo sida aan dareensanahay.
Marmar, ragga qaarkood jir ahaan "way damaan" waqtiga uurka lammaanahooda. Badanaa dareenku waa iska ku meel gaar, waana inaan loo arag diidmo. Lammaanahaagu waxaa laga yaabaa inuu qabo walaacyo kale oo xoogaa ah iyo dareemmo isku dhafan oo ku saabsan uurka, kuwaasoo laga yaabo iney ka dhigaan inuu dhaqmo si aan kala jelcaan lahayn inyarna kuu nuglaado. Waxaa sidoo kale laga yaabaa inaad ku lug yeelato nolosha gudahaaga ku jirta taasoo laga yaabo inuu dareemo inaadan isaga dan u lahayn. Iskala hadla dareemmadaan.
Su'aalaha dhibaatada u keena aabbayaasha ilmaha filaya
● Waxaan u baahanahay inaan galmo sameeyo, laakiin ilaa iyo markii ay uurka qaadday lammaanahaygu ma daneyneyso galmo.Tani waxay dhexdeenna ka abuurtaa xurguf. Maxaan sameyn karaa?
Waxoogaa qaab isu samir ah ayaa ah xalka ugu wanaagsan. Ka wada hadla dhibaatooyinka iyo dareemmada. Galmo sameynta inyar ama helidda wax la isaga jabiyo oo u baahan ka qayb qaadasho yar oo dhinaceeda ah ayaa laga yaabaa iney xal noqoto.
Mararka qaarkood haweenka way ku adag tahay iney dareemaan galmo markaasoo aysan dareensanayn inuu ku habboon yahay. U sheeg iney weli tahay mid soojiidasho leh lana jecel yahay iyadoo caloosheedu weliba soo buuran tahay. Tan waxaa laga yaabaa iney kordhiso xiiseynteeda galmada.
● Markaan dareemo ilmaha oo dhaqaaqaya annagoo galmo sameyneyna, waxay dhammeysaa xiisaha aan u hayo galmada.
Waxaa laga yaabaa inaad ka wel welsan tahay in laga yaabo in ilmaha aad waxyeeshaan. Ilmuhu si wanaagsan ayuu u dhowran yahay isla markaana haraatida iyo is rogiddu shaqo kuma lahan hawshaada galmada. Haraatida ilmuhu waxaa laga yaabaa iney ku xusuusiso doorka lammaanahaaga ee sidii hooyo oo kale. Waxaa laga yaabaa inaad u dareento sidii qof saddexaad oo la socda galmadiinna. Waxaa laga yaabaa iney idin caawiso inaad isku daydaan boos kale si markaas aadnaan u dareemin dhaqaaqa ilmaha.
Cabdiqani Xassan Fanka1/12/2012Walaahi aad beey ufiican tahay in xaaskaga marka aay uurka ledahay loogalmodo cunuga nafaqo ayey utahay naagta foosha ayaa ufududaata ilaa bisha sideedaad howsha sidii hore halowado gantaalka waad rida yaan la oran wili garab qabasho ayey rabtaaReplyDeleteAnonymous1/13/2012waxaan rabaa in lay sheego qaabka ugu haboon oo loo samayn karo galmada oo aan dhibin gabadha xiliga uurka mahadsanidinReplyDeleteRG1/13/2012qaabka galmada uurka oo aan dhib u keenin xaaska waa galmo aayar ah aan xoog loo adeegsanaynin marka istaag oo jibaqabsi ah ayaa ugu fiicanReplyDeleteAnonymous2/20/2012asc wr wbr walaal waxaan rabaa inaad iga jaahil bixisaan haddaan uur leeyayahay oo nin keyga galmo la sameeyo oo kadib biyaha igu shubo ma dhib ayaa ka imaan karo mise shahwada uurku jirka waxba uma dhibeyso iyo haweenta urka leh? fadlan jawab inshaReplyDeleteRG2/20/2012ninkaaga biyo waa kugu shubi karaa haddii ad uur leedahay wax dhib ma keenayaanReplyDeleteAnonymous2/22/2012a/s RG wallala yaal waxaad iga jaahil bixisanxaas keyga waa 3 ila 4 bil waaye micnaha uur bey ii lh dahay all xamdullilaah waxaan rabasida aan isugu galmoon karno oo wax dhib inowgu iman karin hadii alla idmojawaab tiina waa ii muhiim walla yaalReplyDeleteAnonymous2/22/2012a/s RG waxad iga jahil bixisan xaas keyga waxa ay ii leh dahay uur 3 bil ilaa 4 all xamdullillaah marka waxaan raba in aad isi san qibrada aan isugu galmoon karno aniga iyo iidaoo wax dhib oo nagu iman karin insha allaah hadii alla idmo ok jawaab fiican iga siiya wallaala yaal hadii alla yiraahdoReplyDeleteRG2/23/2012waad u tagi gartaa xaaskaaga uurka leh bas waxaa lagaaga baahanyahay inaad aayar u ugu tagto iska ilaali inaad ku kor seexatoReplyDeleteAnonymous2/24/2012gawadha uur ka leh seygeyda maka sari marikartamise ma ugu tagi karar forar side ugu ron jawab wacanjzklh qrReplyDeleteAnonymous2/25/2012a/s/c. iq wati filcizaa wad ku mahad santihin taclinitaaad inta inogu soo gudbiseyn marka su aashaan ku saab san xaaska uur ka leh waxaan waxaan fila in dad badaniaay u bahan yihiin in aay ka helaan tafaa siil dher sida aan filaayo qoraal kani iguma saab sana kaligeygaoo dad badan baa sugaya jawaab tan hadii alla idmo1. Gawadha uur ka qabto waxa aay aad u rabta oday geyda Oday geydanah oday ganah waxa uu ka fikira urkujirta sidi Uu ugu fogeyo wixi dhibi keni karo 2.ok hadii ay noqoto lagama maar maan in aan u galmoodo Sidey aan ku qabili karaya xaaska3.ok foraar si maku qabikara sida qof ka iga horeyi uu sheygima igu so farisan karta xaaska ayada oo wili ur lehwaxaan idinka suga in si fudud aan ku ilali karo hadii alla yiraahdoReplyDeleteRG2/25/2012xaas uur leh foorar waa loogu tagi karaa waxyna ka sari mari kartaaninka bas waa in la iska ilaaliya ruxidda badanReplyDeleteRG2/25/2012naag uur leh waa loogu tagi karaa foorar ama istaag ama inay kaa sara marto wax ma laha galmada haweenka uurka lehReplyDeleteAnonymous12/04/2012naagteyda waxey iga codsatey inaan ka waso futad a markaa xaaskeyga waxey ka raali tahey in aan ka waso dabada markaa ma ka wasi karaa futadda ..waxey tiri dabad aad ayeeyy ii cun cuneysaa markaaa waxey tiri meel kasta oo daloosha iga geli xataa afka siilka futada ..jawaab wacanReplyDeleteAnonymous12/04/2012side loogu tegi karaa naag 9 blilood ah ReplyDeleteRG12/06/2012xaaskaaga haddii futada ay ka dareemayso cuncun waa inaad daawo kale u raadisaa, ReplyDeleteRG12/06/2012naag 9 bilood ah waxaa ugu fiican in dhinac loogu tago ama foorasi laakin waa in si tartiib loo sameeyoReplyDeleteAnonymous12/11/2012walaal aniga 20 jir ayaan ahay bahalkeyga aad ayuu u weyn yahay, naagna wali maguursanin marka culeys ayuu iguhaya marka maxaan culeyska iskaga yareyn karaa walaal.ReplyDeleteAnonymous12/12/2012Su'aashaydu waa hadii aad safar ka timaado oo aad u timaad xaaska oo caado leh maxaa la yeelaa ReplyDeleteAnonymous1/31/2013asc wer wb walaal waad mahadsantahay aniga waxaan rabaa su aashaan aan aadka ugu baahanahay inaad iiga jawaabtid ninkayga aan 2week lasoo joogay oo markaan kasoo tagayna horaan iska baaray wax uur ahna iskuma arkin oo markaasna isla markiiba caadaa iga timaaday lkn hadaan dhabar xanuun dareemayaa iyo xanuuno aad ubadan ee goormee lagu ogaani kara uurka adigoo mahadsan ReplyDeleteAnonymous1/31/2013asc wer wb walaal waad mahadsantahay aniga waxaan rabaa su aashaan aan aadka ugu baahanahay inaad iiga jawaabtid ninkayga aan 2week lasoo joogay oo markaan kasoo tagayna horaan iska baaray wax uur ahna iskuma arkin oo markaasna isla markiiba caadaa iga timaaday lkn hadaan dhabar xanuun dareemayaa iyo xanuuno aad ubadan ee goormee lagu ogaani kara uurka adigoo mahadsan ReplyDeleteRG2/10/2013waxa kaa yimid haddii a caadi yihiin uur ma jiro laakin haddii dhiig kale u yahay way dhici kartaa in meesha uur jiro 8 maalmood kaddib waa la ogaan karaa haddii kaadida la baaro uurkaReplyDeleteAdd commentLoad more...